Ọnye na-bụ Alfred Wegener? Biography na akụkọ ihe mere eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ị mụtara na kọntinent anaghị eguzo maka akụkọ ụwa dum. Kama nke ahụ, ha na-agagharị. Ọnye na -bụ Alfred Wegener? bụ ọkà mmụta sayensị ọkọnọ kọntinent drift tiori na Jenụwarị 6, 1921. Ọ bụ atụmatụ gbanwere akụkọ ihe mere eme nke sayensị ebe ọ gbanwere echiche nke ike ụwa. Kemgbe mmejuputa atumatu a nke ngagharị nke kọntinenti, nhazi nke uwa na oke osimiri gbanwere kpamkpam.
Mara nke oma n’ime ihe omuma banyere nwoke meputara echiche a di nkpa na onye kpatara otutu esemokwu. Gụọ na ịmatakwu 🙂
1 Alfred Wegener na ọrụ ya
2 Akụkọ na mmalite
3 Mgbe agagharị nke kọntinent
4 Njem ikpeazụ ya
Alfred Wegener na ọrụ ya
Wegener bụ onye agha nke ndị agha German, prọfesọ gbasara ihu igwe, na onye njem nke mbụ. Ọ bụ ezie na nkwupụta ahụ o gosipụtara metụtara nkà mmụta ala, ọkà mmụta ihu igwe nwere ike ịghọta n'ụzọ zuru ezu ọnọdụ nke ihe ndị dị n'ime ụwa na ịdabere n'ihe àmà sayensị. O nwere ike ịkọwapụta mbigharị nke kọntinent ahụ, na-adabere na nkwenkwe mara mma nke ala.
Ọ bụghị naanị ihe omumu banyere ala, mana ndu, paleontological, meteorological na geophysical. Wegener mere ihe omumu banyere omimi nke mbara igwe. Ihe ọmụmụ ndị a abụrụ ntọala maka echiche dị ugbu a nke tectonics plate. Ọ bụ eziokwu na Alfred Wegener nwere ike iwepụta tiori nke kọntinent ga-aga. Ma, o nyeghị nkọwa doro anya banyere ikike nwere ike ịkwaga ya.
Ya mere, mgbe dị iche iche ọmụmụ na-akwado site na tiori nke kọntinent, oke osimiri na ala paleomagnetism, efere tectonics pụtara. N'adịghị ka ihe a maara taa, Alfred Wegener chere echiche banyere ngagharị nke kọntinent ọ bụghị nke tectonics plate. Echiche a wee bụrụkwa ihe na-awụ akpata oyi n’ahụ n’ihi na, ọ bụrụ otu a, ọ ga-eweta ọdachi na ụdị mmadụ. Na mgbakwunye, ọ gụnyere ịdị uchu iji chee nnukwu ikike nke kpatara maka ịhapụ kọntinent niile. Na nke a mere si otú ahụ mee ka ngụkọta recomposition nke Earthwa na oké osimiri na N'ezie nke geological oge.
Ọ bụ ezie na ọ chọpụtaghị ihe kpatara kọntinent ahụ ji aga, o nwere nnukwu uru n'ịchịkọta ihe akaebe niile enwere ike n'oge ya iji guzobe otu a.
Akụkọ na mmalite
Mgbe Wegener bidoro n’ụwa sayensị, obi tọgburu ya atọgbu ịgagharị Greenland. O nweela ezigbo mma maka sayensị nke dị n'oge a: ndị Meteorology. N'oge ahụ, ịtụ ọnọdụ ikuku nke na-akpata ọtụtụ ebili mmiri na ifufe dị nnọọ mgbagwoju anya ma bụrụ nke na-ezighi ezi. N'agbanyeghị nke ahụ, Wegener chọrọ ịbanye n'ime sayensị ọhụrụ a. Na nkwadebe maka njem ya na Antarctica, a kpọbatara ya na mmemme ogologo njem. Ọ makwaara etu esi esi esi eji eme ọfụma na balloons maka ihu igwe.
Ọ kwalitere ikike ya na usoro ya na ụwa nke ụgbọ elu, ruo n'ókè nke nweta ndekọ ụwa na 1906, ya na nwanne ya nwoke Kurt. Ihe ndekọ o setịpụrụ bụ iji fee awa 52 na-enweghị nkwụsị. Nkwadebe a niile bara uru mgbe a họọrọ ya ka ọ bụrụ ọkà mmụta ihu igwe maka njem ndị Danish na-aga n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Greenland. Ndị njem ahụ were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2.
N'oge Wegener nọ na Greenland, ọ malitere ọtụtụ ihe ọmụmụ sayensị banyere ihu igwe, geology, na glaciology. N'ihi ya, enwere ike ịhazi ya nke ọma iji guzobe ihe akaebe nke ga-egbochi ịpụgharị kọntinent. N’oge njem ahụ, o nwere ụfọdụ nsogbu na ọnwụ, mana ha egbochighi ya inweta ezigbo aha. E lere ya anya dị ka onye njem tozuru etozu, yana onye njem njem.
Mgbe ọ laghachiri Germany, ọ chịkọtara ọtụtụ mpịakọta nke ihu igwe na ihu igwe. Na 1912, ọ gara njem ọzọ, oge a na-aga Greenland. Mere ya ọnụ Onye nyocha Danish JP Koch. Ọ mere ụkwụ dị ukwuu iji ụkwụ were akpụrụ mmiri. Site na njem a, ọ gụchara akwụkwọ ya na climatology na glaciology.
Mgbe agagharị nke kọntinent
E kwughị ihe banyere Alfred Wegener mgbe emechara ngosipụta kọntinent a. Na 1927, o kpebiri ịga njem ọzọ na Greenland site na nkwado nke German Research Association. Mgbe ahụmịhe na ugwu ugwu enwetara site na nkuzi nke kọntinent, ọ bụ ya kacha daba adaba na njem ahụ.
Ebumnobi bụ isi bụ liwu ugbo ihu igwe nke ahụ ga-enye ohere inwe mmụba nke ihu igwe n'ụzọ dị n'usoro. N'ụzọ dị otú a enwere ike ịnweta ozi gbasara oke ifufe na nsonaazụ ha na ụgbọ elu transatlantic. E setịpụkwara ebumnuche ndị ọzọ n'ọhịa gbasara ihu igwe na glaciology iji mata ihe mere kọntinent ji kwaga.
E mere njem kacha mkpa ruo mgbe ahụ n'afọ 1029. Site na nyocha a, enwetara ozi dị mkpa maka oge ha nọ na ya. Ma ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịmata na ọkpụrụkpụ nke ice karịrị 1800 mita miri emi.
Njem ikpeazụ ya
Emere njem nke anọ na nke ikpeazụ na 1930 na nnukwu nsogbu site na mmalite. Ihe enyemaka sitere na akụrụngwa dị n'ime ime abịaghị n'oge. Oge oyi malitere ike ma ọ bụ ihe kpatara Alfred Wegener iji gbalịa ịnye ebe mgbaba. Oké ifufe na snowfall jupụtara ebe ahụ, nke mere ka Greenlanders ndị goro ọrụ gbawara. Oké ifufe a butere ihe ize ndụ ịlanarị.
Ole na ole fọdụrụ na Wegener ga-ata ahụhụ n'oge ọnwa Septemba. N’adịghị ka ihe oriri ọ bụla, ha rutere n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ n’October, ya na otu n’ime ndị ha na ha so kpụkọrọ ọnụ. O nweghị ike ịga n'ihu njem ahụ. Ọnọdụ nhụsianya nke enweghị nri ma ọ bụ mmanụ ọkụ (ọ bụ naanị mmadụ abụọ n'ime mmadụ ise nọ).
Ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ e nyere abaghị uru, ọ dị mkpa ka a gaa n’ebe a na-enye nri. Wegener ye nsan̄a esie Rasmus Villumsen ẹkedi mbon oro ẹkefiakde ẹdi mbenesụk. Alfred mere ememme ncheta nke iri ise ọ gbara na Nọvemba 1, 1930 wee pụọ n'ụtụtụ echi ya iji nweta ihe oriri. N'oge nchọta a na-achọ ihe achọpụtara na amụtara na enwere oke ikuku ikuku na okpomọkụ nke -50 Celsius C. Mgbe nke ahụ gasịrị, a hụghị ha ka ha dị ndụ ọzọ. A hụrụ ozu Wegener n'okpuru snow na May 8, 1931, kechie ya n'ime akpa ụra ya. Enweghi ike inweta ahu ma obu akwukwo ya, ebe uche ya ikpeazu.
Ahụ ya ka dị, jiri nwayọ na-agbadata na nnukwu glacier, nke ga-ese n'elu mmiri otu ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọnye na-bụ Alfred Wegener?
Ihe niile dị ezigbo mma ma zuo ezu, ihe onyonyo, ederede ...